Zimbabwe Yobatana neDzimwe Nyika Kupemberera Zuva reWorld Radio Day
Nhasi Zimbabwe iri kubatana nenyika dzepasi rose riri kucherechedza zuva rekutepfenyurwa kwenhau nedzangaradzimu kana kuti World Radio Day.
Mhemberero idzi dziri kuitirwa kuGweru uko kunenge kuine hurumende, sangano reUNESCO nemasangano akazvimirira oga.
Bazi reUnited Nations reUNESCO ndiro rakatara muna 2011 kuti musi wa 13 Kukadzi unge uchicherechedzwa zuva iri kuri kuda kukurudzira kuti vanhu pasi rose vadyidzane munyaya dzekushandisa maradio uye kuti vanhu vakwanisewo kuona mashoko akakosha kuburikidza nemaradio.
Dare reUnited Nations General Assembly rakazozvitambira muna 2012. Nyanzvi munyaya dzezvekuburitswa kwemashoko dzinotenderana kuti muAfrica vanhu vakawanda vachiri kuwana mashoko kubva kuradio.
Radio yakatanga kunzwika muAfrica muna 1923 kuJohannesburg, South Africa.
MuRhodesia, radio yakatanga kutepfenyurwa mumakore ari pakati pa1932 kusvika 1933. Asi kunyangwe hazvo radio yave nemakore akawanda kudai yaparurwa, Zimbabwe yakawana kuzvitonga kuzere muna 1980 iri kukundikana kupa vanhu vakazvimirira kanawo vanotepfenyura mumatunhu kana kuti macommunity radio marezinesi.
Mazuva mashoma apfuura mushure mekuvimbisa kupa vamwe marezinesi, bazi rezvekuburitswa kwemashoko rakaburitsa mashoko ekuti vanenge vachida kupihwa marezinesi ekutepfenyura kumatunhu vanofanira kubhadhara mari inosvika zviuru zvisere nemazana mashanu isingadzorerwe yekuti vapihwe mapepa, vozobhadhara mari inosvika zviuru gumi nezvinomwe pagore uye mari yemasaisai inosvika mazana mashanu ane gumi remadhora.
Vamwe vanoti mari iyi yakawandisa zvikuru zvinoburitsa pachena kuti hurumende haisi kuda kuti pauye vamwe vasiri ZBC vanotepfenyura.
Asi munyori mukuru mubazi rezvekuburitswa kwemashoko VaNick Mangwana vanoti hurumende yakazvipira kupa vanhu marezinesi.
Vaitungamira Radio VOP iyo yakavharwa uye yaitepfenyura kunge kuNetherlands VaJohn Masuku vanoti hurumende haina chido chekupa vanhu marezinesi.
Mashoko aya anopikiswa nevanokokera mabasa musangano reZimbabwe Association of Community Radio Stations Amaim Viviene Marara-Zhangazha.
Nyaya yekushaisa dzimwe nhepfenyuro mukana wekuwana marezinesi ndiyo yakapawo kuti hurumende yeAmerica iparure Studio 7 ine muzinda muWashington DC.
Vamwe vakaita seCommunity Radio Harare vave kumanikidzwa kutepfenyura padandemutande reinternet izvo zvinonzi nasachigaro wenhepfenyuro iyi VaGivemore Chipere zvinodhura.
Vamwe vari kuda marezinesi vanosanganisira Radio Dialogue, WeZhira Community Radio, Hwange FM, Radio Chiedza, Budja FM nedzimwe.
Mhemberero dzegore rino dziri kuitwa pasi pedingindira rakanangana nekuti radio, kusiyana kwepfungwa uye budiriro kana kuti Radio, Diversity and Development.